आमा र बुबा काठमाडौँ गएपछि एक्लै भए निर्मलाका दिदीबहिनी ! त्रासले सुत्दैनन् घरमा ! - Kendra Khabar
आमा र बुबा काठमाडौँ गएपछि एक्लै भए निर्मलाका दिदीबहिनी ! त्रासले सुत्दैनन् घरमा !
२०७५, १३ मंसिर बिहीबार ०६:४१
टिनले छाएको एकतले घरअगाडि बरन्डामा प्लास्टिकको कुर्सीमा १५ वर्षीया मनीषा पन्त टोलाएर बसिरहेकी थिइन्। एकैछिनमा छेउको घरमा गएकी ११ वर्षीया सरस्वती आइपुगिन्। बुधबार दिउँसो घरमा पुग्दा निर्मलाका दिदीबहिनी निरास देखिन्थे। आजको नागरिक दैनिकामा यो खबर छ ।
‘साँझ यिनीहरूले घरमा पनि खाना बनाउँदैनन्। मैले पकाएर खाऊ भन्दा पनि मन लगाएर खाँदैनन्’, मञ्जुले भनिन्, ‘साँझ ६ बजेतिर मेरो घरमा आउँछन्, आएनन् भने म आफैं खोज्न जान्छु।’ तीन बहिनीमा निर्मलालाई मिठो खाना बनाउन आउने भएकाले आमा यताउता हुँदा उनले पकाउने गरेको मनीषाले बताइन्। ‘बहिनीले खाना पकाउँथी। हामीले पकाउनु पर्दैनथ्यो’, उनले भनिन्, ‘अहिले हामीलाई खाना पकाउन गाह्रो हुने गर्छ।’ बुबालाई सन्चो हुँदैछ छ भनेर आमाले फोन गरेको मनीषाले बताइन्। ‘कहिले घर आउने टुंगो छैन, सन्चो भएपछि मात्र आउँछु भन्नुहुन्थ्यो’, उनले भनिन्।